That's so good, right?: August 2008
ကျွန်တော့် boyfriend က လူမြင်ကွင်း..အဲ..တနည်းဆိုရရင် public area တစ်ချို့မှာ sex လုပ်ရတာကိုရင်ခုန်ကြိုက်နှစ်သက်နေသလိုပါပဲ။ သူလိုးတာကို လူကြည့်ခံချင်သလို၊တစ်ခြားအတွဲတွေ လိုးတာကိုလည်းကြည့်ဖို့နှစ်ခြိုက်သူပါ။ အပြာကားတွေထဲက မြင်ကွင်းတွေကို သိပ်မကြိုက်ဘဲ အစစ်အမှန်မြင်ကွင်း ကိုကြည့်ဖို့ပိုပြီးကြိုက်သူလို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်။ သူ မီးခိုးဝေနေတဲ့နိုက်ကလပ် တွေသွားတာ၊ ဘီယာနည်းနည်းသောက်မယ်၊ သီချင်းနဲ့အတူကမယ်၊ ပြီးရင် ကလပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကအခန်းထဲသွား တခြားလူ တွေရဲ့ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ သော acts of sex ကိုစောင့်ကြည့်ရင်းကျွန်တော့်ကိုသူ့လီးစုပ်ခိုင်းမယ် ...ဒါတွေ ကိုသူအလွန့် ကိုနှစ်ခြိုက်ပါတယ်။
သူအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးမြင်ကွင်းက ရှေ့တည့်တည့်ကကြည့်ရတာ (သို့မဟုတ်) dick – to – dick action ကိုပေါ့။ဘဲနှစ်ပွေအချင်းချင်းလီးကိုပွတ်သပ်နေတာ တွေကို သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျွန်တော့်ဖင်ထဲထည့်မွှေရင်း ကနေ အရသာခံ ကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ညကတော့ အထူးတလည် Hot တဲ့ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့သွားနေကြ နိုက်ကလပ်ကိုသွားခဲ့တယ်၊ ခပ်ဟော့တ်ဟော့တ်ကောင်တွေကို ခေါ်လို့ရတဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာမို့လေ။ ကလပ်ကတော့ ဘာမှမပြောင်းလဲဒီ အတိုင်းပဲ။ ကလပ်ကဘားမှာ အတူထိုင်ခဲ့ကြတယ်၊ပြီးတော့ အကကြမ်းပြင်ပေါ် က နံပါတ်တွေကို အကြည့်မြှားချက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ရင်းပေါ့။
ဒွိယံဒွိယံအတွဲတွေ မီးမှိန်မှိန်မှာကနေတဲ့အထဲက အတွဲတတွဲကို မျက်စိကျမိ ပေါ့တစ်ခါ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ပိန်သွယ်သွယ် ဒါပေမဲ့အရပ်ရှည်ပြီးကြည့် ကောင်းပါတယ် တစ်ယောက်က အသားဖြူပြီးကြည့်ကောင်းသလို တစ်ယောက် က အသားမည်းပြီး သန်မာပုံပေါက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက် စွဲမက်စွာစိုက်ကြည့်နေရင်း sexy dance ကနေကြတာ ကြည့်တဲ့သူတောင်နိုးကြွပြီးထကချင်စိတ်ပေါက်မိတဲ့အထိ။
ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအတွဲကို ခဏလောက်စောင့်ကြည့်မိတယ်လို့ပြောရမလား တကယ်တော့ ကျွန်တော့် boyfriend စောင့်ကြည့်တယ် လို့ပြောရမယ်ထင် တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူတို့ဖြစ်ပျက်နေတာကို သတိမထားပဲ ကျွန်တော့် boyfriend ကိုသာ အာရုံစိုက်နေမိလို့ပါ။အရမ်းချစ်တာလေဗျာ သူ့ကို။ နောက်ဆုံးတော့ သူကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲပြီး"Let's go cutarug." တဲ့ပြောတယ်။အဲဒါက ကျွန်တော့်ကိုသူနဲ့တွဲကတဲ့အခါတိုင်း ပြောနေကျ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ကပွဲကြမ်းပြင်မှာ အတူတွဲကရင်းဟိုစုံတွဲနား မသိမသာ တိုးကပ်ပြီးကမိပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ချစ်သူက သူနဲ့ပိုပြီးကပ်သထက်ကပ် အောင် ဆွဲဖက်ပြီး ဘော်ဒီနဲ့ချုပ်ကိုင်စပြုလာတယ်။ သူဘယ်သူ့ကိုစောင့်ကြည့် နေတယ်ဆိုတာ သူများတွေမရိပ်မိမသိရအောင်ပေါ့။ "သူတို့ နောက်ခန်းထဲသွား လိမ့်မယ်" လို့ ကျွန်တော်က နားနားကပ်ပြီးတိုးတိုးပြောမိတော့ "သူတို့နောက်ကို ကိုယ်တို့လည်း လိုက်သွား နိုင်မယ်လေ"တဲ့ကျွန်တော့်ချစ်သူက။ တော်တော်ရင် ခုန်စရာကောင်းမဲ့မြင်ကွင်းတွေမြင်ရဦးတော့မှာပဲပေါ့ဗျာ။
အကကြမ်းပြင်ပေါ် ခန္ဓာကိုယ်တွေရိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားရင်း လိင်စိတ်နိုးကြွစေမဲ့အက တွေကရင်း ဟိုအတွဲကိုဖျက်ကနဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အသားညိုတဲ့ကောင် လေး...သူ့ကိုယ်ပေါ်ကအင်္ကျီလျော့ လျဲလျဲဖြစ်နေသလို အဲဒီလိုဖြစ်နေခြင်းက ကောက်ကြောင်းလှတဲ့သူ့ကိုယ်ကိုလှစ်ပြနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်။ သူ့ချစ်သူ လူဖြူကောင်လေးကလည်း သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ယိမ်းနွဲ့လို့ မိန့်မူးနေ သလိုပဲ ....တေးဂီတသံနဲ့အတူ အချစ်မူးမူးနေတာပေါ့လေ။
"They areapretty sight!" ကျွန်တော့်bf က remark ပေးလေရဲ့။ "အိုအသေ ချာဆုံးပေါ့။ သူတို့အတွဲကို ငါတို့ကြည့်ပြီး အာရုံစိုက်နေတာကို သူတို့သတိထား မိတယ်လို့မင်းထင်လား။"လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့ "Hmm..., may be .May be they think it's hot."ပြုံးပြီးပြောပါတယ်။
နည်းနည်းမိုးချုပ်စပြုလာတော့ တေးသံကမြူးကြွရာကနေ ငြိမ့်ငြောင်းတဲ့ သံစဉ်ကိုကူးပြောင်းလာတယ်။ဒွိယံဒွိယံ အတွဲတစ်ချို့ကတော့ ထိုင်ခုံရှိရာကို လှမ်းလာကြသလို တစ်ချို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတေးသွားနဲ့အတူ မျောပါလို့ ပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အာရုံထားဂရုပြုနေတဲ့အတွဲကလည်း ကလပ် နောက်ဖက်က နားနေခန်းရှိရာကို တရွေ့ရွေ့ကရင်းဝင်သွားလေရဲ့။
"come on" ရည်းစားက လက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး လူသွားလမ်းလေး အတိုင်း ခေါ်ဆောင်ကာ ရှေ့ကအတွဲနောက်ကိုမသိမသာလိုက်သွားပါတယ်။ ကလပ် နောက်က အခန်းတွေက ခပ်မှိန်မှိန်သာထွန်းထားလေတော့ အတွဲတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ပေါ့။ အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ထောင့်နားမှာ ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ အတွဲ... .သူတို့ နှုတ်ခမ်းချင်းဂဟေဆက် ကိုယ်ချင်းပူးပြီးအလုပ်များ နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့် bf ကနှစ်ယောက်သားအတူတကွကြည့်လို့ရအောင်ရယ် မြင်ကွင်းရှင်း တဲ့အနေ နဲ့ရော နောက်ကနေဆွဲဖက်လိုက်ရင်း "ဟူး...စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲကွ. .ဟာ ဟ"။ မသိတာကျနေတာပဲဗျာ နောက်ကနေလိုးရင်း ရှေ့က show ကိုကြည့်ချင်တာလေသူက။ရှေ့ကအတွဲကိုကြည့်ရင်း စိတ်တွေပိုပြီးပြင်းပြ လာသလိုပါပဲ။ အသားညိုတဲ့ဘဲက သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သလို အသားဖြူတဲ့ကောင်ကလေးကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပေါ့။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပွေ့ဖက်ရင်း အချင်းချင်းလီးကို ပွတ်သပ်နေကြတာလေ။ အဲဒီအချိန် မှာ သူတို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှပ်အင်္ကျီတွေလည်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ရောက်နေတာပေါ့။
အောက်ပိုင်းရုတ်တရက်အေးကနဲဖြစ်သွားပါတယ်ထင်တာ ကျွန်တော့် bf ကလည်း ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်တယ်လေ။ပြီးတော့ သူသွင်းတဲ့ အခါအဆင်ပြေအောင်လို့ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော့် hole လေးကို လျှာနဲ့ကလိ (.....ရှီး...အား...အ....ဖီးလ်ပဲ။) လက်ချောင်းလေးတွေ အသွင်းအထုတ်ပြုရင်း ပြင်ဆင်နေတယ်။
တင်ပါးတလျှောက် ဖျစ်ညှစ်တာကို ခံစားလိုက်ရသလို မာထောင်နေတဲ့ လီးရဲ့ တစ်ထစ်ချင်းတိုးဝင် လာတာကိုလည်း ခံစားရမိပါတယ်။ အနေအထားနည်းနည်း အထာမကျတော့ ပုံစံပြောင်းရအောင် ခဏငြိမ်လိုက်ချိန်မှာ မျက်စိကိုမှိတ် စိတ်ကို ဖြေလျော့ပြီး အတွင်းထဲဝင်လာတဲ့ လီးရဲ့မာကျောမှုကို ဖီးလ်ယူရင်း...ရှေ့ကို နည်းနည်းကုန်းပေးလိုက်တယ်။ အလိုးခံဖို့ အဆင်ပြေတဲ့အနေအထား ရောက်ပြီ ထင်တော့မှ တင်ပါးကိုတဖြည်းဖြည်းနောက်ပြန်ဆုတ်ရင်း လီးအဆုံးထိသွင်း ယူလိုက်မိပါတယ်။
တငြိမ့်ငြိမ့် တသိမ့်သိမ့်လေရှေ့ထိုးနှောက်ငှင်နဲ့မွှေနေတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူက တော့ရှေ့ကအတွဲကိုကြည့်ရင်း ဖီးလ်ယူနေတာထင်ပါရဲ့ လိုးတာသိပ် မကြမ်းသေး ဘူး စောင့်ချက်နှေးနှေးပေါ့။ ဒါကိုပိုကြိုက်ပါတယ် အဆုံးထိသွင်း လိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းပေါ်တဲ့အထိ ထုတ်လိုက် တစ်ချက်ခြင်း.....အား....အ။
မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ရှေ့ကအတွဲကတော့ အနမ်းမုန်တိုင်းထန် နေဆဲ။ အခန်းထဲမှာ လူတစ်ယောက်မှမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ သူတို့တွေလုပ်နေကြတာ။
လူမဲကောင်လေးက သူ့လီးနဲ့ သူ့ lover ရဲ့ဒစ်နှစ်ခုပူးပြီး stoking လုပ်တာများ ကျွမ်းမှကျွမ်း။ အနမ်းတွေ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ပျံ့ကျဲကြတယ်။ stoking အတူလုပ် နေကြတယ် မီးရောင်မှိန်မှိန်အခန်းထဲမှာ။ တစ်ယောက်က အသားအရေ ညိုမောင်း တစ်ယောက်ကဖြူဖွေးနေတာ...ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ လက်တွေ့မြင်ကွင်းလည်းဆိုတာ...။
ကျွန်တော့် lover ကလည်း သူတို့ကို ကြည့်နေရင်းtempo မြင့်လာတာကို နားရွက်နားက လေပူနွေးနွေးနဲ့ အသက်ရှူသံမြန်ဆန်မှု ပြီးတော့ ခါးကိုကိုင် ထားတဲ့ သူ့ရဲ့လက်တင်းကျပ်လာမှုတွေက သိသာပါတယ်။
အဖြူကောင်လးက နမ်းစုပ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုခွာလိုက်ရင်း မျက်စိကိုမှိတ်နှုတ်ခမ်း တွေကို လျှာနဲ့သရပ်လိုက်ရင်း သူ့ချစ်သူပေါ်မှီ နားနားကပ်ပြီး ခပ်တိုးတိုးစကားဆို လေရဲ့။ဘာပဲပြောပြောလေ ခပ်တိုးတိုးညည်းညူသံနဲ့ အတူ သူ့ရဲ့ ခပ်ညိုညို belly သားတွေအပေါ် နို့အဖြူရောင်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပုံက ကြည့်လို့ကောင်း သေးတော့တာ။ (သူထွက်တော့မယ်ဆိုတာကို ကပ်ပြောတယ်နဲ့တူပါတယ်။ လူမဲကောင်လေးက ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျပ်စွာဖက် တွယ်ပွတ်သပ်ပေးရင်း ကောင်းကောင်းဆက်တိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာကိုး။)
ကျွန်တော် the dark beauty ရဲ့သူ့ climax ကိုရောက်ဖို့ ဆက်လက်လှုပ်ရှား နေတာ ကိုလည်း ဆက်ကြည့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ညိုညိုတုတ်တုတ် ဒစ်ကိုဖြဲပြီး ဂွင်းတိုက်လိုက် နားလိုက်ဆိုက်တိုက်လှုပ်ရှား လိုက်လုပ်နေတာ.. ....ကြည့်တဲ့သူ မှာ သွားပြီးကိုင်တွယ်ချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းရမယ်။ အာ..... သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်လည်း မကြာခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာကို ခံစားမိလာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် bf ရဲ့ လီးကလည်း ပိုပြီးကြီးထွားလာသလို မာကျောတောင့်တင်းမှုကို လည်းဖင်ထဲကကြွက်သားတွေက အာရုံရနေလေတော့ မကြာခင်သူလည်း ပြီးတော့မှာပေါ့။ ပခုံးသားလေးတွေ၊လည်ဂုတ်သားလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွကိုက်ရင်း နောက်ကခပ်ပြင်းပြင်းညှောင့်.....မွှေ...လုပ်နေတော့ မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒူးတွေလည်းညွှတ်ချင်လာသလို ....ခပ်သွက်သွက်လေးထုရင်း ပန်းထုတ်မိ ပြီပေါ့....အား...အ..အ။ တဆက်တည်းကျွန်တော့် lover ရဲ့ moan အသံကို ကြားရလေတော့ သူလည်းပဲ သူ့ goal ကိုရရှိသွားမှန်း ခပ်ပြင်ပြင်းလေး ကိုခံစား သိရှိခံစားလိုက်ရပါတယ်။
ဟူး.....ကိုယ့်ကိစ္စပြီးတော့မှ ရှေ့ကိုအာရုံပြန်စိုက်မိတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြည့် နေခဲ့တဲ့ ဘဲနှစ်ပွေက သူတို့ကိစ္စပြီးတော့ ဒီဘက်လှည့်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ကြည့်နေတာပါလား။နှစ်ယောက်လုံးပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ မျက်ခုံးတွေပင့်ပြီး "Did you enjoy the show" ဆိုတဲ့အထာတွေနဲ့ကြည့်နေပုံက ဘာပြန်ပြောနိုင်မှာလည်း သူတို့ကို....ကျွန်တော့်bfက "likes to watch." ။
Posted by Alex Aung at 10:53 AM No comments: